होसियार !! नङ्गमा यस्ता परिवर्तन देखिए बेवास्ता नगर्नुहोस्, हुनसक्छ यति ड’रलाग्दो रो’गको ख’तरा ! - Alert Khabar
Homeस्वास्थ्य-जीवनशैलीहोसियार !! नङ्गमा यस्ता परिवर्तन देखिए बेवास्ता नगर्नुहोस्, हुनसक्छ यति ड’रलाग्दो रो’गको ख’तरा !
तपाइको आफ्नो स्वास्थ्य अबस्थाको जानकारी लिन नियमित चेकजाच गरिरहनु भएको होला । नियमित गरिने चेकजाँचले शरीरमा कुनै रो’ग छैन भनेर ढुक्क हुनुभएको पनि हुनसक्छ । तर तपाइको शरीरमा क्यान्सरले घर बनाएको हुन पनि सक्छ । आफ्नो शरीरमा केही फरक, अनौठो तथा वर्णन गर्नै नसकिने लक्ष्ण देख्नुभयो या सुन्नुभयो भने होसियार हुनुपर्छ । हाज हामीले शरीरमा देखा पर्ने त्यस्ता केही लक्ष्णहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौं जुन धेरैजना महिला दिदी बहिनीहरुले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।
१ स्तन रातो हुनु, दु’ख्नु तथा सुनिनु
यो स्तन क्या’न्सरको लक्ष्ण हो । यस्तो समस्या देखा परेमा आफ्नो चिकित्सकलाई भेटिहाल्नुपर्छ ।
२ स्तनको मुन्टामा परिवर्तन आउनु
स्तनको मुन्टा फराकिलो, लत्रिनु तथा दायाँ वा बायाँतिर झर्नु भनेको स्तन क्या’न्सरको लक्ष्ण हो ।
३ बारम्बार ज्व’रो तथा सं’क्रमण हुनु
यो रक्त नली तथा बोन म्यारोजन्य क्या’न्सरको लक्ष्ण हो । अनि यसका कारण असमान्य सेतो रक्त कोषहरु उत्पादन हुनुका साथै शक्ति क्षृण हुँदै जान्छ र शरीरले शं’क्रमणसँग जुध्न सक्तैन ।
४ झोल तथा ठोस खानेकुरा निल्न गाह्रो
निल्न गाह्रो हुने सम’स्या घाँटीजन्य समस्यासँग संबन्धित हुन्छ । अनि कहिलेकाही यसका कारण फोक्सोको क्या’न्सर समेत हुन पुग्छ ।
५ क’मजोरी तथा थकान
थकान तथा क’मजोरी महसुस गर्नु भनेको क्या’न्सरको लक्षण हो । अनि थकान तथा कम’जारी निरन्तर महसुस भएको खण्डमा बिवास्ता गर्नुहुँदैन । अझै थकानका कारण रातीगरि निन्द्रा लागेन भने आफ्ना चिकित्सकलाई भेटीहाल्नुहोस् ।
६ अनावश्यक रुपमा शरीरको तौल ब्ढ्नु र सुनिनु
महिलाहरुको शरीर अनावश्यक रुपमा मोटो तथा सुनिएका खण्डमा पाठेघर क्यान्सरको संका हुन सक्छ ।
७ भोक नलाग्नु
पाठेघर क्यान्सरको लक्ष्णका कारण महिलाहरुलाई भोक नलाग्ने हुनसक्छ । अनि यस्तो अवस्थामा महिलाहरुले खाना नखाएपनि भोक लाग्दैन ।
८ पेट नियमित रुपमा हलुका सँग दु’खिरहनु
पाठेघरमा समस्या तथा पाठेघरमा क्यान्सर भएको खण्डमा महिलाको पेटमा दर्दहुने गर्छ । फियोमा समस्या भएको खण्डमा पेटदर्द हुन्छ ।
९ दिशामा र’गत आउनु
कोलेरेक्टर क्या’न्सरको लक्ष्णमा महिलाहरुमा दिशा बस्दा र’गत आउने गर्छ ।
१० अनावश्यक रुपमा शरीरको तौल घटेमा
शरीरको तौल अनावश्यक रुपमा घटेमा कोलन क्या’न्सरको लक्षण मान्नुपर्छ । अनि यो बिस्तारै कलेजोतिर सर्दै जान्छ जसका कारण भोक लाग्दैन ।
११ सास फेर्दा हल्का गार्हो महसुस
फोक्सोको क्या’न्सरहरु मध्ये धेरैले सुरुमा सास फेर्दा नजानिदो तरिकाले अपठ्यारो भएको महसुस गरेका हुन्छन् । तर सुरुमा बेवास्ता गर्नाले पछि रो’गले च्याप्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
१२ नियमित खोकी तथा छातीमा दर्द
ल्युकेमिया तथा लंग ट्यूमरका कारण लहरे खोकी तथा ब्रोङकाइटिस भएको हुनसक्छ । कतिपय फोक्सो क्या’न्सरका रो’गीहरु छाती ‘खेको अनुभव गर्छन् जुन कांध तथा पाखुराको तल सम्म लम्बिएको हुन्छ ।
१३ महिनाबारी अवधिमा अत्यधिक र’गत बग्नु तथा द’र्दहुनु
यो अवस्था पिसावथैलीमा क्या’न्सरको लक्षण हो । यस्तो अवस्था नियमित रुपमा दोहोरिरहेको खण्डमा चिकित्सकलाई भेटी हाल्नुपर्छ ।
१४ अनुहार सुनिएको
कतिपय बि’रामीहरुमा फोक्सोको क्या’न्सर लागेको बखत उसको अनुहार सुनिएको तथा रातो हुने गर्छ ।
१५ शरीरको कुनै घाउ निको नहुनु तथा सजिलै र’गत बग्नु, छालाजन्य क्या’न्सरमा यस्तो सम’स्या देखिने गर्छ ।
१६ नङ्को रङमा परिवर्तन आउनु
हाथगोडाको नङमा अकस्मात तरिकाले परिवर्तन देखिन थाले पछि सचेतना अपनाउनु पर्छ । यो बिभिन्न प्रकारको क्या’न्सरको लक्षण हुनसक्छ । यस्तो अवस्था छाला क्या’न्सर, फोक्सो क्या’न्सर तथा कलेजो क्या’न्ससमा देखिन्छ ।